FOIRE ECONOMIQUE-COMMERCIALE DES 23 REGIONS : Hampisokatra lalam-barotra ho an’ireo mpandraharaha | Journal Madagascar
Tosika ho an’ny mpandraharaha amin’ny sehatr’asa rehetra. Ho tanterahina eto Analamanga sy manerana ireo faritra 22, manomboka ny 28 ka hatramin’ny 31 oktobra 2021 ny « Foire économique-commerciale des 23 régions ». Nisy ny fampahafantarana amin’ny ankapobeny sy ny mey ho fisehon’ny hetsika ny 01 septambra 2021 teny Ivandry. Nambaran’ny mpikarakara avy ao amin’ny Mada Vision fa iarahana manatontosa amin’ny Governoran’ny faritra sy ireo mpandraharaha manerana ny faritra, indrindra ireo vehivavy mpandraharaha ity hetsika ara-toekarena sy ara-barotra ity. « Samy ahitana io hetsika io manerana faritra 23, mandritra io efatra andro io. Ny tanjona tiana ho tratrarina dia hanampiana ireo mpandraharaha manerana ny faritra 23 ahita lalam-barotra, hifandray ara-barotra, hifanome vaovao momba ny tolotra sy tinady ilain’ny faritra 23”, hoy izy.
Filazam-baovao mampahafantatra ny mombamomba ny orinasa na ny mpandraharaha 3000 no aparitaka manerana faritra mandritra io fotoana io. “Ho hita manerana ny faritra 23 ihany koa ny vaovao rehetra momba ny fitondram-panjakana satria tsy afa-misaraka amin’ny sehatra tsy miankina ny raharaham-panjakana. Ho hita ao ny vaovao momba fiadidian’ny repoblika, ny governemanta, ny fifandraisana ara-diplomatika sy mpiara-miombon’antoka satria ireny ny koa dia misy tosika tsy afa-misaraka amin’ny toekarena”. Araka ny fanazavan’ny mpikarakara hatrany fa trano heva 300 no hiranty ho an’ny faritra Analamanga ary tsy ho latsa-danja amin’izay ny any amin’ny faritra. Misokatra ho an’ireo mpandraharaha amin’ny sehatr’asa rehetra, orinasa madinika, salantsalany, vaventy, mpanao asa tanana, tantsaha ny « Foire économique-commerciale des 23 régions ». Afaka mandray anjara amin’ny faritra hafa ireo mpandraharaha maniry ny hanokatra lalam-barotra na hampahafantatra ny vokatra na mitady fiarahamiasa any amin’ny faritra.